अब ‘युट्युव च्यानल’ पनि दर्ता हुनुपर्ने ! (नियमावलीसहित) « News24 : Premium News Channel
अब ‘युट्युव च्यानल’ पनि दर्ता हुनुपर्ने ! (नियमावलीसहित)
काठमाडौं । अब युट्युव च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण –एघारौं संशोधन) नियमावलीमा, २०७८ जारी गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।